किन उत्तर कोरियाले धेरैभन्दा धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ ? – Pahilo Page
किन उत्तर कोरियाले धेरैभन्दा धेरै क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ ?
४ माघ २०७८, मंगलवार १२:०४ 74 पटक हेरिएको
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाले जापान नजिकै समुद्रमा दुई छोटो दूरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। सोमवार बिहान गरिएका प्रहारहरू प्योङ्याङ नजिकैको विमानस्थलबाट गरिएको दक्षिण कोरियाली सेनाले जनाएको छ। जापानले पनि यसको पुष्टि गरेको छ।
गएको दुई सातामा उत्तर कोरियाले गरेको यो चौथो क्षेप्यास्त्र प्रहार हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियालाई बलिस् टिक र परमाणु हतियार परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ तर पूर्वी एशियाली राष्ट्रले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै नियमित क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्दै आएको छ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जङ-अनले राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रवार उत्तर कोरियाले रेलबाट छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताएको थियो भने त्यसको केही दिनअघि प्राविधिक रूपमा सुदृढ दुई हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको दाबी गरिएको थियो।
जनवरीमा गरिएको क्षेप्यास्त्र प्रहारको सङ्ख्या र प्रवृत्ति यसअघिभन्दा फरक छ । सामान्यतया उत्तर कोरियाले आफ्नो विशेष दिनहरूको वरपर वा दक्षिण कोरिया-अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यासका बेला क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्ने गरेको छ।
विज्ञ अङ्कित पान्डाका अनुसार उत्तर कोरियाले आफ्नो क्षेप्यास्त्र क्षमता बढाउन र तिनलाई तयार राख्न परीक्षण गर्ने गरेको छ र पछिल्ला परीक्षणहरू त्यस्तै हुन् । तर, अहिले ‘किम जङ-अनले देशवासीलाई पनि सन्देश दिएका छन् कि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेलामा पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा सम्झौता गरिन्न,’ पान्डा भन्छन्।
उत्तर कोरियामा बढ्दो आर्थिक सङ्कटबीच खाद्य सङ्कट देखिएको छ। यसको कारण महामारीका कारण गरिएको सीमा बन्द हो जसले गर्दा चीनसँगको व्यापार टुटेको छ।नेता किमले हालै उत्तर कोरियाले ठूलो जीवन-मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेको बताएका थिए। तर सँगसँगै उनले हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्र विकास गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए।
जो बाइडन अमेरिकाको राष्ट्रपति भएयता उत्तर कोरियाको अमेरिकासँग वार्ता टुटेको छ। बाइडन प्रशासनले गत साता मात्रै उत्तर कोरियामाथि थप आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोमवार गरिएको परीक्षणलाई सोही अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्धको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ।
क्षेप्यास्त्र प्रहार चीनमा सुरु हुन लागेको महत्त्वपूर्ण हिउँदे ओलिम्पिक्सभन्दा केही साताअघि भएको छ। हिउँदे ओलिम्पिक्स फेब्रुअरी ४ मा सुरु हुँदै छ। ‘ओलिम्पिक्सको सँघारैमा आफ्नै ढोका अगाडि उत्तर कोरियाले परीक्षण गरेको चीनले स्वागत नगर्ने मेरो सोच छ,’ उत्तर कोरियाली विश्लेषक चाड ओ’क्यारोलले ट्विटरमा लेखेका छन्।
‘यस्तो भइरह्यो भने हामीले उत्तर कोरिया कुनै विषयमा चीनसँग असन्तुष्ट रहेको सम्भावना पनि हेर्नुपर्छ।’ तर, पान्डाका अनुसार चीन खुसी नभए पनि ती परीक्षण लामो दूरी र परमाणु हतियारका नभएको कारण चीनले सहने खालका छन्।
चीनसँग व्यापार सुरु गर्ने विवरणमाझ चीनले उत्तर कोरियालाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरिरहेको र सैन्य क्षेत्रको संयोजन गरिरहेको विज्ञ लिफ एरिक इसलेले बताए। चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई विचार गर्दा उत्तर कोरियाले हिउँदे ओलिम्पिक्सलाई असर नपार्न सन् २०२२ को परीक्षणहरू अहिल्यै गरेको हुनसक्छ।’